» नेपाल आईडल विशेषमा को भन्दा को कम ?
नेपाल आईडल विशेषमा को भन्दा को कम ?
५ असार २०७७, शुक्रबार १३:५६
मकवानपुर, ५ असार । नेपाल आईडल सिजन ३ को विशेष एपिसोड बुधबार युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको छ । आईडलका केही सहभागीहरुले यथास्थानबाटै रेकर्ड गरेका गीतहरु विशेष एपिसोडमा समावेश गरी प्रसारण गरिएको हो । यस एपिसोडमा सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठले भने सहभागिता जनाएकी छैनन् । यस विशेष एपिसोडमा कुन प्रतियोगीहरुले कस्तो गाए ? अनि कसको प्रस्तुति राम्रो भयो ? यसका बारेमा यस भिडियो सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ ।
यस विशेष एपिसोडको सुरुवातमा सिजन १ र सिजन २ का केही प्रतियोगीहरुको आवाज समावेश गरिएको कोरोना विशेष गीत राखिएको थियो । ‘सबैतिर सन्नाटा’ बोलको गीत बसन्त चौधरीले लेखेका हुन् । न्ह्यू बज्रचार्यको संगीत र गोपाल रसाईलीको एरेञ्जमा तयार भएको उक्त गीतमा कालिप्रसाद बासकोटा, प्रताप दास, रवि ओड, बिक्रम बराल, सुमित पाठक, अस्मिता अधिकारी, अमित बराल र पवन गिरीको आवाज समावेश गरिएको छ । विशेष एपिसोडको पहिलो प्रस्तुतिका रुपमा सिजन ३ की प्रतियोगी मुस्कान रानाभाटले ‘भगवान कहाँ म जाउँ’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निकै नै सुमधुर आवाजमा गीत प्रस्तुत गरेकी मुस्कान सिजन ३ को उत्कृष्ट ६ सम्म पुगेकी थिईन् । त्यसपछि भएको वाईल्डकार्ड राउण्डमा भने मुस्कानले सहभागिता जनाएकी छैनन् । त्यसपछि सिजन ३ की अर्की चर्चित प्रतियोगी ममता गुरुङको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । ममताले ‘बनेको छ पहराले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सिजन ३ को उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेकी थिईन् । ममताले उत्कृष्ट ९ बाट बाहिरिएपछि पनि वाईल्डकार्ड राउण्डमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । उत्कृष्ट ९ मा पुगेसँगै बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी ममता त्यसपछि शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । वाईल्डकार्डको रिजल्ट भने आउन बाँकी छ ।
ममताको प्रस्तुतिपछि नेपाल आईडलमा अर्गानिक आवाजका रुपमा चिनिएकी रचना रिमालको प्रस्तुति राखिएको थियो । उनले ‘यो जन्मभूमिको आंगनमा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । सिजन ३ मा रचनाले गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उत्कृष्ट ८ सम्ममात्र पुग्न सफल भएकी थिईंन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डभन्दा अघि कुनै पनि अवार्ड नजितेकी रचनाले वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भएकी थिईन् । रचनापछि सिजन ३ कै सर्वाधिक चर्चित प्रतियोगी प्रविण बेड्वालको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । सिजन ३ मा संगीतको उस्तादको संज्ञा पाएका प्रविणले ‘सम्झनाको सारांगी’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति सदाझैँ मेलोडियस रहेको थियो । प्रविण अहिले उत्कृष्ट ४ सम्म पुगेका छन् । उनले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ८ वटा अवार्ड जित्न सफल भएका छन् ।
प्रविणको प्रस्तुतिपश्चात सिजन ३ को उत्कृष्ट १२ सम्म पुगेकी स्वस्तिका ढकालको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । उनले ‘नजिक छैन’ बोलको रोमान्टिक गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । मकवानपुरको हेटौँडा ८ कमाने निवासी स्वस्तिकाले नेपाल आईडलको तेस्रो सिजनमा निकै राम्रा प्रस्तुतिहरु दिएकी थिईन् । स्वस्तिकाको प्रस्तुति पछि सिजन ३ मा भर्सटाईल गायकका रुपमा चिनिएका अर्का प्रतियोगी किरण कुमार भुजेलको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । किरणले ‘सागर बरु सुकेर गईजाला’ बोलको गीत गाएका थिए । किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा सहभागी भएर थप तहल्का मच्चाएका किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् ।
किरणको प्रस्तुति पश्चात विशेष एपिसोडमा सिजन ३ की अर्की चर्चित प्रतियोगी मिग्मा लामाको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । सिजन ३ मा रक स्टार र मेलोडी क्वीन दुबैको छवि बनाउन सफल मिग्माले ‘सम्बोधन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । मिग्माले नेपाल आईडलमा उत्कृष्ट १० सम्म पुगेर चर्चा कमाएकी थिईन् । उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा प्रविण बेड्वालसँग युगल प्रस्तुति दिएकी मिग्माले पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेता पनि उनी शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । त्यसपछि वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेकी उनले प्रतियोगितामा ३ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मिग्माको प्रस्तुति पश्चात सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ मा पुगेका नेशन पुन मगरको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । सिजन ३ को उपाधी दाबेदाहरु मध्येका एक मानिएका नेशनले ‘नरिसाउन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति सदाझैँ निकै राम्रो भएको थियो । उनले सिजन ३ मा ७ वटा अवार्ड जितिसकेका छन् ।
नेशनको प्रस्तुतिपश्चात नेपाल आईडल सिजन ३ मा सर्वाधिक अवार्ड जित्न सफल सज्जा चौलागाईको प्रस्तुति राखिएको थियो । सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ मा पुगेकी सज्जा रकस्टारको छवि बनाउँदै अघि बढेकी छिन् । उनले ‘पन्छी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले गाएका मेलोडी गीतहरुमध्ये यो प्रस्तुति पनि निकै राम्रो भएको थियो । उनले अहिलेसम्म सर्वाधिक ११ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । सज्जाको प्रस्तुति पश्चात विशेष एपिसोडको अन्तिममा सिजन ३ का अर्का उपाधी दाबेदार केभिन ग्लान तामाङको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । केविनले ‘आज फर्कि हेर्दा’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई दर्शकहरुले रुचाएका छन् । उत्कृष्ट ४ मा पुगेका केविनले अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । आदरणिय दर्शकविन्द, तपाईलाई नेपाल आईडलको विशेष एपिसोड कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।